Coronavirus, ọha mmadụ nke na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya sie ike ma ọ bụ nweta ya? : Martin Vrijland
Coronavirus, ọha mmadụ nke na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya sie ike ma ọ bụ nweta ya?
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 23 March 2020	• 10 Comments
O doro anya na coronavirus wetara nnukwu harden na ọha mmadụ. Can ga - ahụ na mwakpo niile a na - eme na ntanetị na - echekwa onye ọ bụla na - anwa ikwupụta echiche dị iche Emela ihe ọ bụla. N'ime ihe karịrị afọ asaa m dere, achọpụtara m na ọnụ ọgụgụ ndị agha nkịtị nke na-agba ndị ntorobịa ya bọọdụ na social media karịrị ọnụọgụ ndị agha na-eji égbè. Ha dị na ndepụta ndị enyị gị ma ha nwere ọrụ ndo nke o yiri ka ọ naghị akwụ ụgwọ dị ukwuu, mana ha nwere ike ịnweta nke ọma ma ugbu a na-etinye oge dị ukwuu n'azụ keyboard ha. Ha nwere gag na steeti ahụ? Ndobe uru, belata ahịrịokwu?
Mgbe ị gụchara akwụkwọ m, ị chọpụtala na eziokwu dị ka anyị si ghọta ya na-enwe mmetụta dị ukwuu site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị a etinyelarịrị ma bụrụ ndị steeti jizi ụgwọ, dịka ọ ga-adịrị onye ọ bụla. na steeti teknụzụ nke teknụzụ na-apụ apụ ugbu a. Na GDR mbụ dị n'okpuru Soviet Union, tupu ọdịda nke Mgbidi Berlin, otu n'ime ụmụ amaala 1 bụ Inoffizielle Mitarbeiter (IMB). Really chere n’ezie na sistemụ a ga-aba n’ime kọmpụta ájá ma ọ bụrụ na ọ gara nke ọma? Were ihu gị niile nke ọma.
Onye ọ bụla achọpụtala nsogbu nke nsogbu Coronavirus. Steeti enwere ọtụtụ iri ijeri ijeri n'otu oge ị weghara ụgwọ ọnwa, nyere ndị ahịa aka na mkpa, ma kwụọghachi ụtụ isi? Olee otú nke ahụ ga-esi kwe omume? Ruo ọtụtụ afọ, a na-agbanye agagharị ma ugbu a enwere ike imepe ngwa ngwa kpamkpam! Anyị na-agba ama na nzuzo iwebata otu ụzọ isi akpata ego (dịka n'okpuru komunizim). Ego izizi nke Inoffizieller Mitarbeiter nwere ike nweburu na nzuzo na ogologo oge.
Enyemaka steeti ahụ a na-atụghị anya ya nwere ike bụrụ na ọ ga - esite na narị euro 750 nke E depụtaghachiri ECBt nwere. Ma, enwere ite ozo.
Mgbe nkeji iri na anọ nke 4 gasịrị, euro 2019 na ụtụ ego ezumike nka nọ na ego ezumike nka niile. Ego ezumike nka kasịnụ gụnyere ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn), PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek), PBF BOUW (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheen Mbanga) na PMen. Ha niile nwere ihe dị ka Ijeri 909 nyego isi obodo. Ego ezumike nka na ndị ọzọ na-etinye ego na ụlọ ọrụ na-eweta oke ahịa azụmaahịa na mgbanwe ahịa ngwaahịa Amsterdam.
Ego ndị ahụ lara ezumike nká ahụ kpataara ndị mmadụ ahịa, ma na-adakpọ ahịa ahịa ndị ahụ n'oge ọgba aghara a. M kọwara n'ụzọ zuru ezu na ihe otiti a na-abịa isiokwu a.
Lọ mgbasa ozi na-akọ ugbu a na enweghi nnukwu ego ezinaụlọ n'ụlọ iji gboo uru ezumike nka niile ha kwere ndị na-eso ya nkwa maka ugbu a na n'ọdịnihu. Onu ogugu ego gbadara site na 29 pasent rue 101 percent na ubochi 95 (Sun.) Trouw kọrọ adịworị na Machị 2). Nke a pụtara na enwere 95 cents na mkpụrụ ego euro ọ bụla akọwapụtara. ECB a na-enyefe ndozi nkwado nke QE (Eke easing) otutu afo. Ọtụtụ ụlọ ọrụ enweela ike idowe ọnụ ahịa ngwaahịa nke aka ha dị ka oke, n'ihi na ha nwere ike ibiri ego n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọmụrụ nwa na ụlọ akụ etiti zụtara ụgwọ ahụ. Ọ bụrụhaala na ị zụtara ya, ego agaghị aba n'ahịa ahụ, kama ọ ga-adịgide na nke ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ.
Ugbu a steeti Dutch na-adọba ọtụtụ iri puku n'ime ọha mmadụ (nke a na-esikarị n'aka ECB), ego a na-abanye na ọha mmadụ. E kwuwerị, enyere ya ndị mmadụ ga-azụta nri na ihe ọ drinksụ immediatelyụ ozugbo. Ọ bụrụ na ibipụta ọtụtụ iri ijeri dịka QE ma nke a na - aga n'ihu na - agbagharị na ntọala nke ndị na - etinye ego, ọ nwere obere mmetụta na uru ego na ndụ n'ezie. Ka osi di, oburu na I ghapu otutu iri ijeri ma nye ndi mmadu, o nwere ike ibute ha elu. Nke a pụtara na nkwado ahụ e kwere ná nkwa nwere ike ịbụrụ ọtụtụ ndị ahụ ihe mgbu ugbu a ụfọdụ na-enwe obi ụtọ maka ezumike nke ịnọdụ n'ụlọ, ma nke ahụ abụghị ihe ọchị mgbe izu 1 gachara. Mgbe onu oriri gbakutere, ọ ga - esiri ike ịkpa akpa ọzọ ma zụọ ọnụ.
Ọ gaghị eju m anya ma ịhụta ego ezumike nká site na mba. N’ezie n’ezie maka eziokwu ahụ bụ na ego ezumike nka na-anọkwa n’agbụ gọọmentị (nchekwa ụgwọ) ọzọ ma ọ bụrụ na gọọmentị na-enweta ego site na ECB, ha agaghị aba uru ọzọ.
Echere m na anyị nọ na mmechi nke ngụkọta oge, na-aga site na ihe m chere bụ ọchịchị onye kwuo uche ya gaa na njikwa ọchịchị mmekọrịta nke teknụzụ (usoro njikwa dijitalụ). Ọkacha mma ịgbanye. Ihe ọ bụla anyị maara na mbụ ga-agbanwe (gụnyere ego ezumike nka). Companieslọ ọrụ dị iche iche ga-abụ mba mba, ọbụghị nke onwe, mana nzọụkwụ site na nzọụkwụ na onye ọ bụla ga-enweta isi ego A ga - enweriri ike inweta ezigbo ego ahụ ma ọ bụrụ na enwere nrụpụta zuru ezu nke usoro ego ụwa niile, ọ na - atụkwa anya na - eduga ya na nke a. Na US, anyị hụrụ Donald Trump kwupụtara usoro ndị ụnyaahụ dịka e weere ebe a na Netherlands. Nke ahụ bụ ihe ịrịba ama n’elu mgbidi.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ikwe nkwa inweta ego bụ isi na-enweghị ego a na-abaghị uru ozugbo n'ihi mmụba, mgbe ahụ ikwesịrị iwepụ nnukwu ụgwọ nke ego edepụtara. Nyerekwa na ego ezumike nka bu ndi nwere ikike inweta ugwo nke steeti Dutch, isi iyi ugha na ego ndi ahu aghaa.
Ugbu a amatabeghị m na ụdị nkwụghachi ụgwọ a dị egwu ga-ewere ọnọdụ, n'ihi na mgbe ahụ ịkwesịrị igbochi ụlọ akụ na usoro ego niile n'ụwa niile. Na ngwụcha, agbanyeghị, ekwenyere m na ọrụ na-aga n'ihu usoro ego ụwa ọhụrụ.
Ọ dị mfe ịmepụta usoro ọhụụ na ọgba aghara zuru ezu. Ọgba aghara ahụ ga-adịkwa ukwuu. Ikekwe, anyị ga-ebu ụzọ hụ ịnọrọ ego ezumike nka na steeti Dutch. N’ezie, idobe ego ezumike nka abụghị ihe karịrị ịzụtara ọtụtụ ego edepụtara maka apụl na akwa, mana ọnụọgụ nke ebe nkwakọba ihe gị bụ ihe dị narị ijeri ijeri elu karịa ma ị nwere ike inye karịa.
Iji belata obere akụkọ dị mkpirikpi: Ekwere m na ịrị elu hyperinflation bụ ihe ga - emesịa chụpụ ndị Dutch na njigide mkpọchi ha. Agụụ!
Ndị mgbasa ozi na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agbapụ vidiyo ha na ndị mmadụ tụkwasịrị obi (Inoffizieller Mitarbeiter, IMB'ers) ndị e chere na ha anaghị agbaga otu 1.5 mita iji mepụta alibi ahụ m buru amụma maka izu abụọ: coronavirus na-apụ n'aka "n'ihi na anyị agbanweela mgbanwe" yabụ ugbu a, anyị ga-aga mkpọchi siri ike karịa na France na Spain.
Ya mere enwere ike ireso ndi mmadu ahihia siri ike. Ka ọ dị ugbu a, a ga-agwakwa anyị na ọ dị coronavirus na-akụta na ọ na - adị njọ karịa. Yabụ na anyị ga - achọta onwe anyị n'ọnọdụ ọ bụla na - atụ ụjọ mmadụ ibe ya ma ọ bụrụ na ị zute mmadụ, nke a nwere ike igbu gị. N'ihi ya, onye ọ bụla na-awagharị n'enweghị ihe ọ bụla nwere ike ịbụ “onye nwụrụ site na ikpe ọmụma” ogbu mmadụ.
Cheedị echiche ọnọdụ ebe enwere nsogbu na mpaghara nkesa nke ụfọdụ ere ahịa. Chegodi na anabataghị ndị ATM ịnye ego (n'ihi ihe ọghọm nke oria ajọ nje a na-ebufe ọrịa) were were hyperinflation, ebe nkwa Rutte ga - enweta bụ isi ego ga - enweta gị achịcha 1 n'otu izu na akpa nduku. Gịnị ga-eme mgbe ahụ? Mgbe ahụ, agụụ na-agụ ndị mmadụ, mechaa ha esi n'ụlọ ha pụta. Mgbe ahụ ndị agbata obi ha ga-akọrịrị ha, n'ihi na ndị na --eche na ọ ga-abụ oge bọmbụ corona bụ ihe egwu nye onwe ha na onye ọ bụla ha maara. Ndị agha ga-etinyerịrị ọnụ, anyị ga-ahụ na ọtụtụ mmadụ na-apụ n'anya. Nke ahụ abụghị ihe ụjọ, nke ahụ bụ echiche ezi uche dị na ya.
Anyị na-ahụkwa ọgba aghara na Europe nke m na-atụ anya ya. Na ebe ọgba aghara na-achị, enwere mgbe enwere ike ọhụụ na - ebuso iji dozie ihe. Mara mba m nọ na ya na-atụ anya ya kemgbe ọtụtụ afọ. Ọ bụ akwụkwọ edemede niile a ma m akọwa akwụkwọ edemede ahụ n'akwụkwọ m. Ọ bụrụ n’ị gụọ akwụkwọ ahụ na mgbakwunye na akwụkwọ ahụ ebe a na saịtị, ị ga-ama na olileanya dị. Mana nke ahụ na-ewe ntakịrị omimi. Seehụ ihe na - eme dị adị ma bụrụ eziokwu. I kwesiri ịkwado ma mara ọkwa ị ga - eme.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: nos.nl, buw.nl, trtworld.com
Otu esi eme ihe banyere usoro coronavirus (mkpọchi): ndụmọdụ bara uru
Okwu Prime Minister Mark Rutte Coronavirus kwuru: "Ihe a niile dị njọ, mana papa m na-elekọta gị"
Amụma: mkpọchi mkpọchi iji gbochie coronavirus (akụ na ụba na-akụ na ụba na ịkwakọrọ)
Mgbe ngụkọta mkpọchi coronavirus na-abịa na ihe ọ dị ka ya: akwụkwọ nyocha na ndị agha
Tags: igbochi, otu na ọkara, ego ezighi ezi, coronavirus, agba, onu oriri, mkpọchi, mita, Rutte, nkwado
23 March 2020 na 10: 10
Na mgbakwunye na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, nke mmadụ niile (kwuru na ọ na-adọ) na-adọ aka ná ntị na ọ dịghị onye na-eburu ibu ọrụ ya na ọ dịghị agbaso "ngbanye echiche mmekọrịta" nke ndị a na - akpọ ndị ọkachamara), akwụkwọ akụkọ jupụtara ịdọ aka ná ntị ọzọ taa.
Ọkachasa nke telegraf na ịmaja, na-atụzi isi ndị isi taa: BLIND DANGER DANGER ”. Mayors na ndị na-eme ihe ike dọrọ aka ná ntị ma gha ụjọ na Netherlands na-eleghara iwu nke nnukwu nwanne iwu anya, wdg.
Ndị mmadụ na-akwado maka mkpochi mkpọchi ya ma ọ bụ anyị kpatara ya.
Kedu ihe dị iche (echere m na ọ bụ ihe dị iche) na mụ na ndị enyi m (enwere m nnukwu ndị enyi) amaghị onye ọ bụla nwere ma ọ bụ nweela corona, ihe niile sitere n'akwụkwọ akụkọ, Nieuwsuur, Youtube.
Ọ bụkwa ihe ijuanya na ọtụtụ ndị ama ama n'ụwa niile nwere corona, (n'ezie ha abụghị ndị na-eme ihe ike na-eche na ọ dị mma) echere na nje a kachasị anya n'anya ndị ama ama (ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị na-ese ihe, ndị na-agụ egwú, ndị na-eme ihe nkiri ma ghara ikwu banyere ndị a ma ama. ndị na-eme egwuregwu).
Echere m na nke a bụ ihe a na-ahụkarị maka corona virus m na-eche na ọ na-akpa ókè, gịnị kpatara naanị ndị a ma ama?
23 March 2020 na 10: 40
Bubu so na ndi otu NSB .. ugbu a anyi nwere ndi otu IMB?
23 March 2020 na 11: 24
Ọ bụrụ n’ile anya nke ọma, ha bụ ndị otu NSB. Nke a nwere ike ịkọwa ihe kpatara enwere ọtụtụ ụdị mmadụ na Netherlands na ihe kpatara o ji adịrị gọọmentị dị ebe a ichikota ma mee ndị mmadụ obi ụtọ, nke ahụ ejighi ego.
N'oge Agha IIwa nke Abụọ, ndị German na-eme mkpesa mgbe ụfọdụ na ndị Dutch enweghị mmasị na inyere ndị obodo ha aka na ịrara ha nye. Fọdụ mere mkpesa na n'ihi nke a, ha nwere ọrụ buru ibu na ha ji ọrụ n'aka na ị ga-eburu ndị sabo ahụ.
Dutch (ọ bụghị ihe niile) nwere ekwo ekworo nke ukwuu karịa dịka ndị Jamani, ndị Bel na ọbụnadị French, ọ fọrọ obere ka ha nye onye Dutch ọzọ ọkụ na anya, yabụ kedu ihe ga-aka mma ịrara ndị obodo gị na maka nke a bụkwa ezigbo ụgwọ ọrụ iji nweta, echere m na enwere ike ịnwe ndepụta ndị na-echere ndị chọrọ ịghọ IMB.
23 March 2020 na 10: 18
N'uzo n'okporo ụzọ ebe dị anya m hụrụ otu di na nwunye ji aka ha wee na-amakụ ibe ha (ọ nweghị ihe dị njọ na ya) dịka ụmụ kpalakwukwu na-eme, nwata nwoke na nwa agbọghọ.
Otu nwanyị gafere di na nwunye ahụ, anụrụ m ka ọ na-ekwu, ị ga-akwụsị ya na egwu jidere nwa nwoke nke nwanyị ahụ ma jụọ ya ihe na-eme. O kwuru, na-eti mkpu, "ị maara na ịgaghị emewe ara ara." Nwatakịrị ahụ: "ma'am wetuo obi, ọ nweghị ihe ọjọọ". nwanyị ahụ bidoro ịtụ ụjọ wee malite ịkọcha, ọ ga-esitela n'aka, di na nwunye ahụ jiri nwayọ na-aga n'ụzọ ha, nwanyị ahụ kwụsịrị.
Lezienụ anya na ibe unu
23 March 2020 na 11: 16
Mmetụta mister smith na arụmọrụ, ma ọ bụ onye maara, nwanyị ahụ dị ụtọ bụ onye otu NSB ọhụụ (nke a makwaara n'okpuru aha ọrụ inofficieller mitarbeiter).
23 March 2020 na 11: 07
Ndi anochi ego emechiala n’obodo m taa (ule oso? Ka ihu ndi mmadu ime)?
Ana m atụ anya na usoro dị n'izu / ọnwa ndị na-abịanụ nke ga-achọkarịrịrị ọtụtụ olu asụsụ Hegelian tupu ọnụ ọgụgụ mmadụ ga-adị njikere ịnabata ha.
ụfọdụ usoro m na-ahụ (amaghị m ma ha emee mana echere m na ha nwere ike) na nsonaazụ ha:
1) pin ịgba na kaadị kwa ụbọchị / izu, dịka ọmụmaatụ, 50 euro. (imepụta egwu ọgba aghara na ime ka ndị mmadụ bụrụ ndị na - enweghị ego)
2) ma ọ bụ ATM nke na-emeghe obere oge kwa ụbọchị / izu (ịmepụta ọgba aghara na ịbụ onye na-enweghị ego)
3) mmeghe (dika oge nwa oge, ma ugbu a, ọ bụ akụkọ na - adịgide adịgide) iwebata ego bụ isi
4) iwebata ezigbo ego maka ịbawanye ụtụ isi nwa oge ga-eduga, dịka ọmụmaatụ, 90% maka SMEs / freelancers bụ ndị ka na-aga nke ọma ma nweta ezigbo ego ma ọ bụ ndị, dị ka ndị isi, si enweta uru site na ọgba aghara ahụ.
5) ịma mma nke ndị ọchụnta ego bụ ndị chere na ha ji ọgba aghara ahụ mee ihe ma kpata ego n'ihi na ha ma ihe wee nwee ike ịpụta ezigbo ego ịnweta ego na hype corona a. (Ahụrụ m na nke a na-eme nke ukwuu na saịtị mgbasa ozi na saịtị ndị nwere echiche)
6) Nhazi obodo nke ego ezumike nka na ulo oru. (Ihe a na-eme SMEs na mgbochi na nnukwu ụtụ isi (nke a na-akpọ ụtụ ụtụ ọnụ na-adịru nwa oge) na ha niile na-efu ego, gụnyere ụlọ ọrụ ndị ahụ na-eme ezigbo ego n'agbanyeghị ọgba aghara ahụ.
7) ọtụtụ ebe na-abawanye ụba ma sie ike karịa, ahịa ngwaahịa na-agbada kpamkpam. ndi ochichi banyere ngbanwe nke ndi ahia na egosiputara ala ndi obodo (dika e chere na nwa oge) ndi si n’aka ndi ozo wee zuta ha site na ndi ozo (ma oburu na ha anobeghi ya).
8) Mmeghe ngwa ngwa 5g zuru ụwa ọnụ maka nchekwa na igbochi nje na-esochi.
23 March 2020 na 12: 15
Mgbe ego ezumike nka na-akọwori n’ala, a na-amazi ihe ndị edeturu ala. Nke a bụ ụzọ iji belata ụgwọ gọọmentị. Anyị ahụworị nke a na obodo dị ka Hungary, ebe ego ezumike nkata nke onwe nke ndị mmadụ chebere na ụgwọ gọọmentị (n'ihe metụtara GDP) jụrụ ozugbo. Iji maa atụ, gọọmentị ga-ekpochapụ nnukwu ụgwọ nke ụgwọ ha ji, nke nwere ike ịka maka ndị akụ karịa ịhapụ ya ka ọ kwụsị kpam kpam site na onu oriri. Nke ikpeazụ n'ihi na ndị ụlọ akụ achọghị ndị nwere ụgwọ ịgba ụgwọ iji nwee ike iwepụ ụgwọ ha n'ụzọ dị otú a. Thelọ ahụ ga-ekubi ume n'ihi ịkwụghị ụgwọ ọnwa kwa ọnwa iji kwado ụlọ akụ.
23 March 2020 na 13: 33
Ọ bụrụ na ndị mmadụ enweghịzi ike ịkwụ ụgwọ ego ha, bank ga-ejide.
Y’oburu na ekpuputara ulo oba ego (lee lee ABN AMRO), steeti gha enwe ulo ndi ahu ozugbo.
ellysa dere, sị:
23 March 2020 na 13: 07
Witnessgba aka mgba banyere:
Na Fraịde gara aga, agwara m onye Afghanistan gbapụrụ agbapụ nke mere ka akụ na ụba Dutch dị ka onye ọchụnta ego. Ọ gwara banyere ezigbo enyi na China. E kewapụrụ enyi ahụ na ezinụlọ (nwunye na ụmụ atọ) maka ọnwa 2,5. Ha nwetara ụdị vootu si steeti. A na-ahapụ otu onye n'ime ezinụlọ ya ịme ahịa kwa ụbọchị. A ga-eme mkpesa banyere ụdị ebe a ga-eleburu anya. Legitimation na ekwentị na ndepụta ego. Ahịa ahịa na-agbagharị na mmalite, mana ọ na-abụ naanị 3 mepere emepe. Ajụrụ m gịnị banyere ọrụ ya (n'ime ụlọ ọrụ ịkwa akwa). Ọ dabara nke ọma na a “edozikwara”. Agaghị akwụ ụgwọ ụlọ na ọkụ eletrik, ndị steeti kwụrụ ndị ọrụ ụgwọ ịzụta ihe oriri.
E mesịa, mgbe m nọ n'ụlọ, gbakee site na ozi ahụ, ọtụtụ ajụjụ m chọrọ ịjụ. Agbanyeghị, ohere m ga-enwe ike ịgwa ya ọzọ na-esote izu na-ebelata ụbọchị kwa ụbọchị.
1 = ọ dịghị
one = odighi
Ọ bụrụ na ị jụọ ajụjụ ziri ezi, ọkachasị ajụjụ ndị na-akpọ maka ịkọwapụta ihe bara uru banyere ihe omume ụbọchị / nghọta niile, foto ahụ buru ibu ga-apụta na-akpaghị aka. Ọ dịkwa mfe ikwubi site na nghọta ma enwere ezi obi ma ọ bụ ezi obi ojoo
Attn zzpers bụ ndị debanyere aha ha ugbu a maka enyemaka dị mma. Iwu ntinye aka ka dị n’ọrụ. Anata ụgwọ = eme onyinye. Y’oburu na odighi oru aka gi, mgbe ahu enwere oru. Nke ahụ bụkwa usoro nnata ... site na mgbe ochie, usoro feudal ma ọ bụ mmanya ọhụrụ na akpa ochie?
Nweta enyemaka gbasara iwu? nka bu kwa ihe gara aga. A na-emechi ụlọ ikpe mpaghara (obodo) ruo mgbe amara ọzọ.
Anyị niile bụ otu, jide ebe m na-agbagha, ọ bụghị notch wink wink say not more
Ka o sina dị, ọnụ ọgụgụ kasị elu nke mmiri dị. N'ihi na imi were anyị. Nature bu izu isii n’ihu anyi, kalenda bu izu isii n’azu. Hụ Hisjing / jaap voigt ọrụ ma bie ndụ kwem
Soro uwa ma gi bu ezi agwa! Nri elekere (n'elu ube) na ebe ana - eme ihe (na ebe ubara) n’agbanyeghi….
Mindset nrụpụta!… .Ha ịchọrọ ịnye “enyemaka”…
Marijke dere, sị:
24 March 2020 na 05: 36
Martin:… .. “Kedu ebe ego ahụ si bịa? `
Ewezuga na ọtụtụ ndị lara ezumike nka na-anwụ ugbu a, na ego ezumike nká ha na steeti na-efunahụ n'ezie
akụwa penshion na-emezuwanye (nke ha nwere ike ịkwụ ọtụtụ ihe….)… .a
Enwerekwa ihe ọzọ: Agụrụ m ihe dị ka afọ 10 (!) gara aga na ezinụlọ ndị ahụ bara ọgaranya karị (nke a na-akpọ illuminati, Rothschilds, Rockefellers wdg) edebewo 2 0 0 TRILLION iche kemgbe 2 0 0 7 amalarị! Ebe ha nwere ihe jikọrọ ihe karịrị 8 5 0 TRILLION (nke a tụmadụ, ikekwe karịa ugbu a) ị nwere ike iche n'echiche na ha anaghị agbaghara ndị ahụ ruru puku ijeri 200 ahụ na ngụkọta. Nke ahụ puku ijeri 200 dị ka akụ ezé ga-eweghara ụwa niile, nke na-eme ugbu a. N’otu edemede ahụ, nke m enweghị mwute ịnweghị njikọ ọ bụla, ekwuru na ngụkọta nke ndị mmadụ na-abụghị ezinụlọ ndị a, ya mere ụwa, emere atụmatụ na naanị ijeri 40. Ya mere, ọkụ ndị ahụ nwere ego ugboro iri abụọ, ebe ụwa niile dị ijeri asaa.
2 0 0 puku ijeri, ma ọ bụrụ na ịnwere puku ijeri 850 bụ ihe kpatara ya. Ijeri abụọ 2 0 dị 0 na 200 efọd, ọ bụ eziokwu: 18 2 0 ijeri x otu ijeri. N’otu ederede ahụ ka ekwuru na site n’ite ahụ, n’oge a, mmadụ ga-akwụ ụgwọ gọọmenti mba niile na-akparaghị ókè, G WHATN WHAT B W EGO MAKA ịkwụ ụgwọ maka ihe a! Ekebisiri ike n'isiokwu ahụ
'na ịnara ikike`, na Ọ B NOTghị ihe ọ ga-eri. Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ bụ nke a
ego adịghịkwa mkpa.
A ka nwere ike ịchọta edemede, mana rịọ mgbaghara maka enweghị njikọ, ogologo oge gara aga. N’ezie a ga-enwe ndị na-ekwu okwu na-echeta isiokwu a?
" Mgbe ngụkọta mkpọchi coronavirus na-abịa na ihe ọ dị ka ya: akwụkwọ nyocha na ndị agha
'Bill Gates' countum dots 'kaadị ID nke na-eme ka a mara ma ị nwere coronavirus ma ma ọ̀ gbara gị ọgwụ »
Nleta nile: 1.365.129
Martin Vrijland op Coronavirus: ebee ka nje oria si bia, oleekwa otu ha si amụba ma na-agagharị?
Onye nwe ya op Coronavirus: ebee ka nje oria si bia, oleekwa otu ha si amụba ma na-agagharị?
SalmonInClick op Netflix 'oria ojoo: olee otu esi egbochi mgbasa ozi mgbasa ozi' maka ogwu zuru oke nke SuperHuman-2.0?
Emechaala akwụkwọ gị ma ịchọrọ ị nweta ozi ndị ọzọ?